Teknolojia · Marsa, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Teknolojia · Marsa, 2016
Tantara mikasika ny Teknolojia tamin'ny Marsa, 2016
Tetikasan-tsarintany Japoney Mandrakitra Ny Fivezivezena Farany Nataon'ireo Niharam-boinan'ny Tsunami 2011
Azia Atsinanana 25 Marsa 2016
Tetikasa fandraketana an-tsarintany vaovao mamantatra ny fotoana farany niainan'ireo niharam-boina tamin'ny horohorontany sy ny Tsunami tamin'ny Martsa 2011 tao Japana.
Ny Sanda Tsy Lazaina Anao Rehefa Miditra Aterineto Ao Espaina : Ny Aretin-tsainao
Mitambatra ho herinandro ireo andro iandrasana ny fametrahana ny aterineto. Mahatsapa mangidy ianao. Mahatsapa tsy manana hery. Karohanao ao amin'ny google ny hoe “Kafkaesque”.
Nolazain'i Yahoo Ny Fangataham-Panesoram-Botoaty Voalohany Avy Amin'ny Governemanta Rosiana
Eoropa Afovoany & Atsinanana 23 Marsa 2016
Sambany i Yahoo nitatitra ho nahazo fangatahana fanesoram-botoaty avy amin'ny governemanta rosiana amin'ireo servisy tahaka ny Flickr sy ny Vondrona Yahoo.
Azia Atsinanana 23 Marsa 2016
#WhereisBassel (Aiza i Bassel) : Mbola Tsy Hita Ilay Mpahay Teknolojia Syriana Nogadraina
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 18 Marsa 2016
Dimy volana izay, nanjavona tao amin'ny fonja ao Damaskosy, nigadrany nandritra ny efa-taona ilay Syriana mpikirakira tranokala, Bassel Khartabil: Miaraha amin'ireo mpanohana azy ary alefaso ny fanontaniana #WhereisBassel (Aiza i Bassel) ?
Ankehitriny, Mahazo SMS Ny Ray Aman-dreny Rosiana Raha Mikaroka Ny ISIS Ety Anaty Aterineto Ny Zanany ISIS Online
Eoropa Afovoany & Atsinanana 16 Marsa 2016
Rafitra rindrankajy vaovao iray no mampanantena fa hanaitra ireo ray amandreny Rosiana momba izay mahaliana ireo zanany amin'ireo resaka mahery fihetsika sy hetsiky ny vondrona ISIS hita ao anaty media sosialiny.